eDeshantar News | साहित्य Archives - Page 16 of 17 - eDeshantar News साहित्य Archives - Page 16 of 17 - eDeshantar News
कृति शब्दमा सिनेमा
डा. ध्रुवचन्द्र गौतम यस्ता पुस्तक कम छन्, जुन मैले दोहोर्‍याएर पढेको छु । गिरीश गिरीको ‘वीरगन्ज– मेरो सहरको कथा’ त्यस्तै कम किताबमध्ये पर्दछ । पुस्तक अत्यन्त राम्रो छ । रोचक छ । दुई पटक पढ्दा मैले रुचिसाथ पढेँ । यसमा केही प्रतिशत श्रेय वीरगन्ज सहरलाई पनि जान्छ, जुन मेरो पनि आफ्नो भूमि हो । गिरीशले…
साहित्य गुटले लेख्छ कि साधनाले ?
नेपाली साहित्यमा पछिल्लो समय गुटको चर्चा निकै हुने गरेको छ । विभिन्न व्यक्ति र विचारका नाममा आआफ्नै समूह खडा गरिएका छन् नेपाली साहित्यमा । यस्ता समूहले आआफ्ना पक्षका स्रष्टाको महिमामण्डन गर्ने र अर्को समूहको कटु आलोचना गर्ने गर्छन् । यिनीहरूको रमाइलो कुरा के छ भने आफ्ना पक्षका भए जस्ता कमजोर रचना भए पनि उत्कृष्ट भनिदिन्छन्…
प्रेम नभएको व्यक्ति सर्जक हुन सक्दैन
भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस भर्खरै गएको छ । अंग्रेजी महिनाको फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन मनाइँदै आएको यो दिवसलाई अहिले विश्वभर नै मनाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरूले समेत यस दिवसलाई बाक्लै मनाउन थालेका छन्, विशेषगरी युवापुस्ताले । ‘प्रेम’ शब्द परिभाषामा बाँध्न सकिने शब्द हो जस्तो लाग्दैन । यस शब्दले बोकेको विशालतालाई केही शब्द…
नुवाकोटमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवको तयारी पुरा
नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लामा स्थापित भै राष्टव्यापी साहित्यमा विशेष योगदान गर्दै आएको नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानले देशव्यापी कविता महोत्सव यही बैसाख ३ गते नुवाकोटको बटारमा आयोजना गर्नेभएको छ । विशिष्ट कवि तथा साहित्यकारको उपस्थिति रहने उक्त कविता वाचन समारोहमा प्रतियोगीका रुपमा...
२०७२ चैत्र २९
प्रजातन्त्रवादी लेखक यसो भन्न सक्छन् ?
‘प्रगति’ शब्द हरेक मानव जातिका लागि प्रिय शब्द हो । मानवजीवन यसकै लागि संघर्षरत छ । जीवनका हरेक पक्षमा सकारात्मक सुधार, समृद्धि, प्राप्ति नै प्रगति हो । यी कुरा हरेक मानिसका रोजाइ हुन् । मानव स्वभावैले नयाँ कुरा, नयाँ चिज,...
२०७४ माघ १५
मालिका केशरीको सुवर्णलता सार्वजनिक
काठमाडौं । युवा उपन्यासकार मालिका केशरीद्वारा लिखित सुवर्णलता सार्वजनिक गरिएको छ । सोमवार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा उपन्यास सुवर्णलताको साहित्यकार सरुभक्त र प्राज्ञ गीता केशरीले विमोचन गरे । उपन्यासको वारेमा बोल्दै सरुभक्तले भने नारी प्रधान भएर लेखिएको उपन्यासको संख्या...
२०७४ माघ ८
साहित्यकार सरुभक्तलाई मातृशोक
काठमाडौं । नेपाल संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति साहित्यकार सरुभक्त श्रेष्ठलाई मातृशोक परेको छ । आमा लक्ष्मीमाया श्रेष्ठको मंगलबार बिहान ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनलाई मुटु सम्बन्धि समस्या र निमोनियाको उपचारका लागि पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा राखिएको...
२०७४ मंसिर ५
डर्टी पिक्चर, मन्टो र कुमारी आमा
मणि लोहनी स्वतन्त्रता र मुक्ति सजिलै प्राप्त हुने चीज होइनन् । हरेक युगले अर्को युगमा प्रवेश गर्न ठूलै युद्ध गर्ने गरेको छ । मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै बाँधिदै आएका मान्छेका निजी कुराहरुले मुक्ति पाउन आजसम्म पनि लड्नै परेको छ । ...
२०७२ माघ १३
नेता लेखनाथको ‘कांग्रेस र म’
लेखनाथ न्यौपाने नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका जीवितमध्येका निरन्तर क्रियाशील एवं नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ नेता हुन् । भक्तपुर र उपत्यकाका मात्र होइन नेपालमै हाल पार्टीलाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवाका समकालीन र सँगै काम गरेका नेता पनि हुन्...
नित्यराज प्रज्ञाप्रतिष्ठान: एक चिनारी
ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’ गत पुस २० गते वृहस्पति शिक्षा सदन, बालमन्दिर छेउको भवनमा भव्यरूपमा नित्यराज प्रज्ञा पुरस्कार वितरण समारोह भयो । सो दिन यस प्रतिष्ठानको प्रथम वार्षिक कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं प्राज्ञ...